This section will be all about the boxing news and events. It includes Myanmar boxing and other boxing around the world.
19 ก.พ. 2563 | 39,499 Views
19 Feb 2020 | 39,499 views ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ရက်နေ့တွင် စင်ကာပူနိုင်ငံ၌ပြုလုပ်မည့် ONE: KING OF THE JUNGLE ယှဉ်ပြိုင်မှု ပွဲစဉ်များကို ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အန္တရာယ်ကြောင့် ပရိသတ်များမပါပဲ တံခါးပိတ်ကာ ယှဉ်ပြိုင်ထိုးသတ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ONE Championship က သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
20 Jan 2020 | 20,951 views မက်ဂရီဂေါ်နှင့် ဒေါ်နယ် ဆီရိုနီ ထိုးသတ်တဲ့ပွဲကို မေဝယ်သာလည်း လာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။ မေဝယ်သာဟာ လက်ဝှေလောကမှာ ရှုံးပွဲတစ်ပွဲမှမရှိဘဲ ပွဲ ၅၀ ထိုးသတ်ရာမှာ (၅၀) ပွဲစလုံးအနိုင်ရရှိထားပါတယ်။
15 Jan 2020 | 20,872 views ‘အောင်လအန်ဆန်’ ကို မြန်မာစပါးအုံး ဘွဲ့ကနေ မြန်မာအိုင်းရွန်းမန်း(Myanmar Iron Man) လို့ ပြောင်းခေါ်ရမလိုဖြစ်နေပါပြီ။ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ MMA ဖိုက်တာတွေ ဝိုင်းထိုးနေတာကို ပြုံးပြုံးလေး တောင့်ခံပြနေတဲ့ ရုပ်သံက အားလုံးကို အံ့အားသင့်သွားစေခဲ့ပါတယ်။
14 Jan 2020 | 1,293 views အောင်လအန်ဆန်ဟာ ဒီဆုကို ရရှိဖို့အတွက် ဆန်ခါတင်စာရင်းမှာ ပါဝင်တဲ့ ရုရှားနိုင်ငံသား UFC နာမည်ကျော် ဖိုက်တာကြီး ခါဘစ် ၊ အီရန်နိုင်နွယ်ဖွား ဂီကတ်မူဆာဆီ ၊ အမေရိကန်ဖိုက်တာ ဒက်စတင်ပိုရီရာ ၊နောက်ထပ် အမေရိကန်ဖိုက်တာ ဒန်နီရယ် ကော်မီယာတို့ကို ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါ
04 Dec 2019 | 1,278 views မြန်မာကိုယ်စားပြုယှဉ်ပြိုင်ထိုးသတ်မယ့် ထီရယ်လ်ထန်ကို ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ နိုင်ပွဲရယူနိုင်လိမ့်လို့ မျှော်လင့်ထားကြောင်း မယ်ဒယ်ဝိတ်တန်းနဲ့ လိုက်ဟဲဗီးဝိတ်တန်း ချန်ပီယံ အောင်လအန်ဆန်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
25 Nov 2019 | 1,443 views "Proper Np.12" ဝီစကီထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းမှုမှာ တစ်နှစ်အတွင်း အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ပြီး နိုင်ငံပေါင်း (၈) နိုင်ငံအထိ စျေးကွက် ဖြန့်ချဲ့ နိုင်ခဲ့ကာ ဒေါ်လာ (၁၀) သန်းဝန်ကျင်အထိ ရောင်းချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
19 Nov 2019 | 1,438 views မြန်မာဂုဏ်ဆောင် အောင်လအန်ဆန်ဟာ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး တောင်ငူခရိုင် ဘောလုံးကွင်းတွင် တောင်ငူမြို့ခံများနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး မြန်မာလူငယ်များအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာနှင့်ယှဉ်ပြီး အားငယ်စိတ်မရှိဘဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုဖြင့် ကြိုးစားရန်လိုအပ်ကြောင်း တိုက်တွန်းပြောကြား
13 Nov 2019 | 1,287 views One Championship ရွှေခါးပတ်နှစ်ခုပိုင်ရှင် မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် အောင်လအန်ဆန်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ အပါတ်က မြန်မာပြည်ကို အလည်အပတ်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာလ(၁၃) ရက်နေ့က ထိုးသတ်ခဲ့တဲ့ One Championship ပြိုင်ပွဲမှာ ဟဲဗီးဝိတ် ချန်ပီယံ ဘရန် ဗီရာကို အနိုင်ထိုးသ
25 Oct 2019 | 1,491 views MMA လောကရဲ့ နာမည်ကျော် ဖိုက်တာတွေဖြစ်တဲ့ မက်ဂရီဂေါ် နဲ့ ခါဘစ်တို့ဟာ မကြာခင်မှာ ပွဲဖြစ်တော့မယ်လို့ သတင်းတွေက ဆိုသလို ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်းကပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ UFC နာမည်ကျော် ဖိုက်တာ မက်ဂရီဂေါ် မကြာခင်မှာ ကြိုးဝိုင်းအတွင်းကို ပြန်လည် ဝင်ရ
07 Oct 2019 | 1,217 views လာမည့် အောက်တိုဘာလ (၁၃) ရက်နေ့ ၊ ယခုလာမည့် တနင်္ဂနွေနေ့မှာ One Championship ဝိတ်တန်းနှစ်ခုချန်ပီယံ အောင်လအန်ဆန်နဲ့ ဘရန်ဒန် ဗီရာတို့ဟာ Light Heavy Weight ချန်ပီယံဆုအတွက် ဂျပန်နိုင်ငံ ၊ တိုကျိုမြို့မှာ ထိုးသတ်သွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်..။ အဆိုပါ ပွဲဟာ One Champio
09 Sep 2019 | 1,389 views ပြဲအၿပီးမွာ တစ္ခ်ိန္က ခါဘစ္ရဲ ့ျပိဳဘက္ေဟာင္းၾကီး ေကာ္နာ မက္ဂရီေကာ္က မေက်ပြဲျပန္လည္ ထိုးသတ္ဖို့ Twitter မွတဆင့္ခါဘစ္ကို စိန္ေခၚခဲ့ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္က ခါဘစ္ကိုရွံဳးနိမ့္ထားခဲ့ရတဲ့ မက္ဂရီေကာ္က Twitter စာမ်က္နွာမွာ “ေမာ္စကိုမွာ ငါနဲ့မေက်ပြဲျပန္လည္ထိုးသတ္ဖို့ လု
ข่าวทั้งหมด 91 ข่าว 8 หน้า